Ramamimampionona Gérard: “Mba hihazakazaka any amin’ny olona aloha ny mpitondra” | NewsMada
Ramamimampionona Gérard: “Mba hihazakazaka any amin’ny olona aloha ny mpitondra”
“Mila miasa ny olona, dia tonga ny fandriampahalemana. Mba hihazakazaka kokoa any amin’ny olona aloha ny mpitondra, fa tsy ny lafiny materialy. Misakafo izany, salama, mahazo trano onenana tsara, miasa tsara, mahazo karama tsara…? “
Io ny fanehoan-kevitry ny filoha lefitry ny Komitin’ny fampihavanam-pirenena (CFM), avy amin’ny faritany Antananarivo, Ramamimampionona Gérard, ny amin’ny fiatrehana ny toe-draharaham-pirenena amin’izao fotoana izao. Izay any amin’ny olona izay aloha, tokony hihazakazahana; avy eo, milamina ho azy. Endriky ny fihavanana izany.
“Fa tsy hihazakazaka amin’ny fanaovana fotodrafitrasa, ohatra, isika. Tsy manohitra an’izany aho”, hoy izy. Lavitra ezaka izay, na fikarakarana ny olona aza. Misy ny tena akaiky: misakafo ve ny olona, salama, mahazo fanabeazana tsara ve ny zanany, mipetraka amin’ny toerana tsara ve izy, ary milamina… ?
Maika ny maha olona
Amin’ny tsy fandriampahalemana, eritreretina ho vahaolana, ohatra, ny fampitomboana isa ny zandary sy ny polisy. “Vahaolana izany, nefa na ho lasa zandary sy polisy avokoa aza isika: mbola misy ny tsy fandriampahalemana… Fantatsika fa rehefa misy fanafihana: indraindray misy hoe polisy na miaramila na zandary”, hoy izy.
Ny dikan’izany, tsy ny isan’ny fitaovam-piadiana na ny olona vonon-kiady no inona, fa arofanina ihany ireny. Ny tena izy: mety hipetra-potsiny ireny, rehefa mihavana sy milamina ny olona. Araka ny tenin’ny manampahaizana iray izay hoe: mihidy ny varavaran’ny fonja rehefa hendry ny vahoaka.
Tsy ny fanatsarana sy ny fanitarana ny fonja sy ny mpiambina azy no zava-dehibe, fa ny fiambenana ny olona tsy hiditra any.
Ny fanajana ny aina no fototry ny fihavanana
“Ny fanajana ny aina sy ny hasin’ny aina no fototry ny fihavanana. Amin’izany, iainana amin’ny fiainana andavanandro ny fihavanana”, hoy kosa izy momba ny hoe fihavanana eo amin’ny fiainana andavanandro.
Eo amin’ny fitsaboana, ohatra: raha miteraka ka tsy manam-bola, maty raha tsy misy mikarakara. Eo koa, ohatra, ny fampanjakana ny fahamarinana any amin’ny fitsarana izay tena misy kolikoly. Any no ametrahana soatoavina hoe fihavanana: mba tsy hanagadragadra olona fahatany, fa mety mamotika fianakaviana izany.